Hery - Tsiky dia ampy | Aogositra 2007 |
Tonga eto amin'ny blaogy indray aho rehefa avy tsy ni-serasera nandritra ny andro vitsivitsy. Naharitra 120 ora tsy nanokatra serasera.org - sy ny forongony :-) - fa tsy naninona. Izay angamba aho vao voatery nanao toa izany. Ny dikan'izany dia efa azo ilaozana ny serasera (tahaka ireny zazakely hoe azo ilaozana kely ve sa tsia ireny). Azo nianteherana koa ny baby-sitter... (tohiny)
Hira sendra mandalo: J'ai faim de toi
2007-08-14 @ 16:12 in Izaho sy ny ahy
1 - Après toutes ces années
J'ai faim de tout c'que tu es
Tu es tout c'qui me plait
2 - Je veux vivre de ça
J'ai faim d'passer ma vie
Oui,j'ai faim de toi
Ouh j'ai faim de toi.
2007-08-10 @ 07:26 in Izaho sy ny ahy
Tamin'ny 27 jolay teo dia nandeha tany Tivoli izahay, amin'ny saha iray atao hoe "Villa d'Este". Ny tena mampalaza an'i Tivoli dia ireo "asarano" (he he... waterwork) izay tena mahavariana tokoa. Misy Centofontane (100 fontaines) sy ny sisa e :-). Sady tsy nisy guide no tsy nanam-potoana nijanonana loatra koa dia aleo ny sary no hilaza azy. (tohiny)
Baiboly katolika malagasy
2007-08-06 @ 15:27 in Izaho sy ny ahy
Azo atao hoe vita androany ny takelaka baiboly.katolika.org izay takelaka nametrahana ny baiboly katolika dika 1938. Efa ao sy azo vakiana daholo ny lahatsoratra fa mbola mikofoka ao ikalamako (Rondro Ravalson) amin'ny famakiana azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary manitsy izay tokony hahitsy, indrindra eo amin'ireo andininy tokony hotapahina. (tohiny)
Asa: wedding planner
2007-08-05 @ 21:01 in Izaho sy ny ahy
Ny asako hono izany dia wedding planner. Mikarakara mariazy hatramin'ny fampihaonana ny olona roa hatramin'ny fanambadiana. Tsy agence de rencontre fotsiny dia samy miala fa sady mikarakara ny mariaziny mihitsy... ary angamba koa hi-assurer azy ireo hiaina finaritra ao anatin'ny tokantranony, omban-janaka. Rehefa vita izay dia réussi ny mission. :-)
Resaka fotsiny iny...
2007-08-03 @ 11:45 in Sarimihetsika
Sary indray mipika (tsy ahy) hizarana aminareo ny ambiansy ho an'ny mpijery video eny amin'ny elakelatrano. Amin'izao fotoana izao dia efa 300A no fidirana. Efa betsaka koa ny lohateny teny anglisy (Viva eMule!!!). Ary efa tsy kasety intsony no alefa fa efa DVD (re-viva eMule sy ny divX).
Mahazo tombony ny olona mpanao an'io satria mbola tsy ampy fialam-boly ny Malagasy.